Ngwa kachasị mma iji rụọ ọrụ site n'ụlọ | Akụkọ akụrụngwa
Ngwa kachasị mma iji rụọ ọrụ site n'ụlọ
Ụlọ Ignatius | | Aplicaciones, General, Windows
Workingrụ ọrụ n'ụlọ nwere ike ịdị ka utopia maka ndị ahụ niile na-enwetụbeghị ohere ịme ya. Na nsogbu coronavirus, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-atụle ịhapụ ụfọdụ ndị ọrụ, ka o kwere mee, ka ha rụọ ọrụ site n'ụlọ ha, ka ha wee ghara imebi ọrụ ụlọ ọrụ ha kpamkpam.
Ebumnuche nke ngwa dị taa maka kọmputa na ngwaọrụ mkpanaka sara mbara ma anyị nwere ike ịchọta azịza nke ụdị ọ bụla iji nwee ike ịrụ ọrụ site na anya dị ka a ga - asị na anyị na - eme ya n'onwe anyị. Ọ bụrụ n’itabeghị nke bụ ngwa kachasị mma iji rụọ ọrụ site n’ụlọ, a na m akpọ gị oku ka ị gụọ akwụkwọ.
1 Nke mbu na nke mbu
2.1 Ngalaba Microsoft
3 Ngwa iji hazie ọrụ
4 Ngwa maka ederede, ịmepụta mpempe akwụkwọ ma ọ bụ ihe ngosi
4.2 Peeji, Onu ogugu, na Isi Okwu
5 Ngwa jikọọ kọmputa ndị ọzọ remotely
5.2 Desktọpụ Latịn Chrome
Nke mbu na nke mbu
Ihe mbụ anyị ga - eme bụ ịmebe usoro anyị na - agaghị enwe ike ịpụ, ya bụ, tụlee ọrụ dị ka a ga - asị na anyị nọ n'ọfịs anụ ahụ, yana kọfị kọfị, ezumike nri ehihie. Anyị aghaghịkwa ịhazi oge ọrụ. Rụ ọrụ n’ụlọ apụtaghị na anyị ga-anọrịrị onyeisi anyị ma ọ bụkwanụ, ọ bụrụ na anyị nwere, na anyị ga na-arụ ọrụ awa iri abụọ na anọ n’ụbọchị.
Ọ bụrụ na anyị na-arụ ọrụ n'ụlọ ma tinye ọrụ anyị na kọmputa anyị, anyị chọrọ ka ihe niile dị na kọmpụta anyị. Ọ bụrụ na anyị ga - eji ekwentị anyị gwa ndị ọrụ ibe anyị okwu, Instagram, Facebook, Twitter ma ọ bụ ịzaghachi ozi WhatsApp ga - emegharị anyị anya ngwa ngwa. Na ahịa anyị nwere ngwa dị iche iche gbadoro ụkwụ na azụmaahịa na-egbochi nsogbu ndị a.
Ndị otu Microsoft bụ ngwa Microsoft nyere anyị ka anyị rụọ ọrụ ọ bụghị sọọsọ n'ụlọ, kamakwa n'ọfịs, iji nwee ike ịkparịta ụka n'etiti ndị ọrụ ibe anyị na-ejighị ekwentị n'oge ọ bụla. Ọ bụghị naanị na ọ na-eme ka anyị nwee mkparịta ụka, mana ọ na-enyekwa anyị ohere izipu faịlụ ngwa ngwa. Na mgbakwunye, ijikọ ya na Office 365, mgbe a bịara n'ịrụkọ ọrụ ọnụ na dọkụmentị ọ bụ azịza kachasị mma. Microsoft zuru oke n'efu.
Slack bụ otu ngwa izizi riri ahịa iji melite nkwukọrịta azụmahịa. Ọ na-enye anyị ohere izipu ụdị faịlụ ọ bụla, mepụta nzukọ a na-ahụ anya ... mana ọ naghị enye anyị nnabata na Office 365, yabụ ọ bụrụ na ị na-arụkarị ọtụtụ ndị otu akwụkwọ, ihe ngwọta Microsoft nyere anyị bụ nke kachasị mma. Slack bụ n'efu maka ọnụọgụ ụfọdụ nke ndị ọrụ, ebe Ejikọtara Otu Microsoft na ndenye aha Office 365.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, Microsoft enweela ike imeghari na mkpa nke ndị ọrụ ma na-agbakwunye ọrụ ọhụrụ na oku Skype na ngwa oku vidiyo, ngwa anaghị akwụ ụgwọ kpamkpam nke na-enyekwa anyị ohere izipu ụdị faịlụ ọ bụla na nke ahụ, dị ka Microsoft Otu , agbakwunyere na Office 365. Skype dị na iOS, Android, macOS, na Windows.
Ọ bụ ezie na ọ bụ ngwa izipu ozi, dị ka WhatsApp, ntụgharị nke ngwa a na-enye maka kọmputa na-eme ka ọ bụrụ ngwa dị mma maka ịmekọ ihe ọnụ site n'ụlọ. Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere ịkpọ oku n’olu okwu, yabụ anyị nwekwara ike iji ya na ndị ọrụ ibe anyị na-enwe nzukọ. Telegram zuru oke ma dị na Windows, macOS, gam akporo na iOS.
Ngwa iji hazie ọrụ
Mgbe a bịara n'ịhazi ọrụ onye ọ bụla na-arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ ga-arụ, anyị nwere ngwa Trello anyị nwere. Trello na-enye anyị dashboard ebe anyị nwere ike ịhazi ma kenye ọrụ ndị ọrụ ga-arụ. Ozugbo ha mechara ya, ha kaa akara wee gaa na nke ọzọ. Trello bụ n'efu ma dị na iOS na gam akporo, Windows, na macOS.
Ngwa maka ederede, ịmepụta mpempe akwụkwọ ma ọ bụ ihe ngosi
Agbanyeghị na ngalaba a nwere ike iyi ihe nzuzu, ọ bụghị ma ọ bụrụ na ịnweghị iji kọmputa ụlọ gị na-arụ ọrụ oge niile, ebe ọ bụ na ị gaghị enwe ngwa ọ bụla arụnyere iji dee akwụkwọ, mepụta mpempe akwụkwọ ma ọ bụ ihe ngosi.
Mgbe ị na-eke ụdị akwụkwọ ọ bụla, ihe ngwọta nke Microsoft nyere bụ nke kachasị mma na nke zuru oke anyị nwere ike ịchọta taa na ahịa. Naanị ma ọ bụ na ọ chọrọ ndenye aha na Office 365, ndenye aha nke na-enyeghị anyị ohere iji ngwa desktọọpụ, mana na-enyekwa anyị ohere iji Okwu, Excel na Powerpoint site na weebụ, na-enweghị itinye ngwa ahụ n'oge na-adịghị anya. .
Usoro kachasị mma maka Okwu
Ọnụ ego nke ndenye aha kwa afọ na Office 365 Personal (1 onye ọrụ) bụ euro 69 (euro 7 kwa ọnwa). ma tinye Okwu, Excel, Powerpoint na Outlook site na ihe nchọgharị na Access na nkwusa dịka ngwa kọmputa. Ọ dị maka Windows, macOS, iOS na gam akporo
Ọ bụrụ na anyị na-eme atụmatụ ịrụ ọrụ site n'ụlọ n'ọdịnihu, anyị agaghị achọta ngwọta ka mma karịa nke a, ọ bụghị naanị n'ihi ndakọrịta na ịhazi usoro ya, kamakwa n'ihi ọtụtụ ọnụọgụ nhọrọ ọ na-enye anyị, nhọrọ ndị na-ekpuchi ọ bụla mkpa nke nwere ike ibilite. ọ nwere ike ibute n'uche anyị.
Peeji, Onu ogugu, na Isi Okwu
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ Mac, Apple na-enye anyị Peeji, Ọnụọgụ na Isi Okwu n’efu, ngwa nke anyị nwere ike iji mepụta ụdị ederede ederede, akwụkwọ ozi ngosi. Ọ bụ ezie na ọnụọgụ nhọrọ ndị ọ na-enye anyị adịghị elu dịka nke Office, ọ karịrị ezuru ọtụtụ ndị ọrụ. Nsogbu nke ngwa a na-enye anyị bụ na ọ nwere usoro nke ya, nke ga-amanye anyị ịbupụ akwụkwọ ndị anyị mepụtara .docx, .xlsx na .pptx formats
Nhọrọ ọzọ nke Google na-enye anyị, nke a na-akpọ Google Docs, na-enye anyị ohere ịmepụta akwụkwọ site na ihe nchọgharị anyị na-enweghị ibudata ngwa ọ bụla. Nsogbu dị na Google Docs bụ na ọ na-eji ndọtị nke ya, ndọtị nke na-ekwekọghị na Office, yabụ a ga-amanye anyị ịgbanwe akwụkwọ ọ bụla anyị mepụtara, yana ihe ọghọm nke ọnwụ nke usoro ọ gụnyere.
Ngwa jikọọ kọmputa ndị ọzọ remotely
Ọ bụghị onye ọ bụla nwere obi ụtọ inwe ike ịrụ ọrụ site na ụlọ n'ihi na ụlọ ọrụ gị na-eji ngwa njikwa nke dị naanị na ụlọ ọrụ gị. Dabere na onye mepụtara ngwa ahụ, ị ​​nwere ike ịnwere nhọrọ nke na-enye anyị ohere ịrụ ọrụ site na kọmputa ndị ọzọ na ịntanetị. Ọ bụrụ na ọ bụghị, enwerekwa azịza ya.
TeamViewer bụ otu n'ime gboo nke Mgbakọ, ebe ọ bụ na dị ka Office, ọ nwebeghị ezigbo esemokwu na-enye otu atụmatụ ahụ. TeamViewer na-enye anyị ohere ijikwa akụrụngwa ọ bụla, akụrụngwa nke anyị nwere ike idetuo ma ọ bụ zipu faịlụ, soro onye ọrụ nke otu mkparịta ụka ahụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ cheta. Ọrụ a dị na iOS na gam akporo, Windows na macOS, mana ọ bụ n'efu, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe ngwọta kachasị mma iji jikọọ kọmputa na kọmputa.
Desktọpụ Latịn Chrome
Kọmitii Remote Chrome bụ n'efu nke Google na-enye anyị ka anyị nwee ike ijikọrịrị kọmputa ọzọ, ma ọ bụ iji ngwa njikwa nke anyị ji arụ ọrụ n'ọfịs, jụọ akwụkwọ, iji dozie nsogbu na-arụ ọrụ na kọmputa. Na mgbakwunye, ọ dị maka iOS na gam akporo, yabụ anyị nwere ike ịnweta ya site na ama ma ọ bụ mbadamba anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ngwa kachasị mma iji rụọ ọrụ site n'ụlọ
Nkọwa: Samsung Galaxy S20 VS Huawei P30 Pro
Anyị na-eleba anya na Samsung Galaxy S20 5G ọhụrụ